Otu esi etinye Linux Malware Detect (Maldet) na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye Linux Malware Detect (Maldet) na Rocky Linux 8
October 30, 2021 September 11, 2021 by Jọshụa James
Melite nkọwa nje Maldet & Ngwa
Nhọrọ – Wụnye ClamAV
Iji Maldet nyochaa - Ọmụmaatụ
Akụkọ nyocha Maldet
Linux Malware Chọpụta (LMD), bụkwa nke a maara dị ka Maldet, bụ nyocha malware maka Linux ewepụtara n'okpuru ikike GNU GPLv2. Maldet bụ ihe a ma ama n'etiti sysadmins na webụsaịtị devs n'ihi na ọ na-elekwasị anya na nchọpụta nke azụ azụ PHP, ndị na-ezigara ozi gbara ọchịchịrị, na ọtụtụ faịlụ ọjọọ ndị ọzọ enwere ike ibugo na webụsaịtị mebiri emebi site na iji data iyi egwu sitere na sistemu ịchọpụta intrusion netwọkụ wepụta malware nke bụ. A na-eji ya eme ihe na mbuso agha ma na-ewepụta mbinye aka maka nchọpụta.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ma jiri Maldet na Rocky Linux 8.
Iji wụnye Maldet, ị ga-achọ ebe nchekwa ngwugwu ha, nke enwere ike ịhụ na onye ọrụ gọọmentị download page. Agbanyeghị, mgbe nkwalite emee, ha anaghị agbanwe URL faịlụ ahụ, yabụ na ọ dabara nke ọma, njikọ nbudata agaghị agbanwe mgbe niile.
N'oge nkuzi a, mbipute (1.6.4) bụ nke kacha ọhụrụ; Otú ọ dị, ka oge na-aga, nke a ga-agbanwe. Ka ibudata ụdị ọhụrụ ugbu a na n'ọdịnihu, pịnye iwu a:
N'akụkụ na-esote, ị ga-achọ iwepụ ebe nchekwa ahụ, nke ị nwere ike iji iwu a:
Ugbu a ị kwuputala na ewepụtara ebe nchekwa ahụ nke ọma, ị ga-eme ya (CD) n'ime ndekọ ma mebie edemede nrụnye iji wụnye Maldet na iwu a:
Nwụnye kwesịrị zuru ezu n'ime ihe nke sekọnd, ma ị ga-enweta ụdị mmepụta dị ka n'okpuru:
Ugbu a ịmechara edemede nrụnye nke ọma, ị nwere ike gbanwee faịlụ nhazi site na iji editọ ederede masịrị gị. N'okpuru bụ ọmụmaatụ ụfọdụ ntọala na omume na-ewu ewu iji (nano) editọ ederede:
Nke mbụ, mepee (conf.maldet) faịlụ:
Ọzọ, chọta ahịrị ndị a wee dezie ha ka ọ bụrụ n'okpuru:
Mara, ntọala niile ebe a bụ nhọrọ, ma ị nwere ike ịtọ nke gị n'ihi na enweghị azịza ziri ezi ma ọ bụ na-ezighi ezi ebe a.
Melite nkọwa nje Maldet & Akụrụngwa
Nke mbụ, ị ga-achọ ijide n'aka scan_user_access="1″ dị na faịlụ nhazi a kpọtụrụ aha na mbụ ka ọ gaa n'ihu.
Na-esote, gbaa iwu a ka ịmepụta ụzọ ziri ezi maka onye ọrụ abanye; ị nwere ike inwe nsogbu imelite na-emeghị nke a.
Ọ bụrụ na ịmeghị nke a, ị ga-enweta njehie a.
Ka imelite nchekwa data nkọwa nje Maldet, mebie iwu a:
Nke abuo, ka ịlele maka ụdịdị sọftụwia dị ọhụrụ, pịnye iwu a:
Otu akụkụ kachasị mma gbasara iji Maldet bụ ndakọrịta ya na ClamAV, nke nwere ike ịbawanye ikike nyocha Maldet site na ọtụtụ ihe.
Nke mbụ, wụnye ebe nchekwa EPEL iji wụnye ụdị ClamAV kachasị ọhụrụ dị yana dabere na ya:
Iji wụnye ClamAV, ị nwere ike ime ya site na ịme iwu ndị a:
Biko hụ ntuziaka anyị na wụnye na iji ClamAV Maka Rocky Linux 8 ma ọ bụ ntuziaka zuru oke na ịtọlite ​​​​ClamAV.
Nke mbụ, ị ga-amata nke ọma na syntax Maldet. Iwu niile na-amalite na maldet wee soro nhọrọ na ụzọ ndekọ aha, dịka ọmụmaatụ, maldet [OPTION] [Ụzọ ntụaka].
N'okpuru kpuchiri ọtụtụ ihe atụ syntax na Maldet:
-b: Mee ọrụ n'azụ.
- ị: Melite mbinye aka nchọpụta malware.
-l: Lelee mmemme faịlụ log maldet.
-d: Melite ụdị arụnyere.
-a: Nyochaa faịlụ niile dị n'ụzọ ahụ.
-p : Hichapụ ndekọ, nnọkọ na data nwa oge.
-q: Kpụrụ malware niile na akụkọ ahụ.
-n: Hichaa & weghachi malware site na akụkọ ahụ.
Iji nwalee Maldet wee hụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ị nwere ike ịnwale ọrụ LMD site na nbudata a. (ihe atụ mbinye aka nje) sitere na webụsaịtị EICAR.
Na-esote, ị ga-eme ihe (maldet) iwu ka inyocha ihe (tmp) ndekọ dị ka ndị a:
Ugbu a, na faịlụ anyị butere, ị ga-enweta ụdị mmepụta dị ka n'okpuru:
Dị ka ị chọpụtala, a naghị edobe nkuzi a ka ọ bụrụ iche maka nhazi anyị. Mgbe ụfọdụ, nkwenye ụgha na iwepụ faịlụ na sava dị ndụ nwere ike ịkpata nsogbu karịa ka ọ na-edozi. Ezigbo sysadmin ma ọ bụ onye nwe ihe nkesa ga-anọgide na-enyocha ya mgbe niile iji lelee nsonaazụ ya wee nyochaa ya.
Ọzọkwa, site na mmepụta, ị nwere ike ịhụ na na ihe nkesa ule anyị, anyị etinyela ClamAV na Maldet na-eji igwe nyocha ClamAV iji mee nyocha ahụ wee nwee ihe ịga nke ọma n'ịchọta malware.
Ụfọdụ iwu ndị ọzọ ị nwere ike ime bụ lekwasịrị anya ndọtị faịlụ ihe nkesa gị; Faịlụ PHP na-abụkarị ebumnuche nke ọtụtụ ọgụ. Ka iṅomi faịlụ .php, jiri ihe ndị a:
Nke a dị mma maka weebụsaịtị ma ọ bụ sava ndị nwere ọtụtụ faịlụ iji nyochaa, na obere sava ga-erite uru site na nyochaa ndekọ ndekọ niile.
Maldet na-echekwa akụkọ nyocha n'okpuru ebe ndekọ aha (/usr/ local/maldetect/sess/). Ị nwere ike iji iwu a yana nke (Nchọpụta nyocha) ịhụ akụkọ zuru oke dịka ndị a:
Na-esote, a ga-akpọrọ gị gaa na mkpesa mmapụta na editọ ederede (nano) dịka ọmụmaatụ n'okpuru:
Dị ka ị na-ahụ, akụkọ zuru ezu nke ndepụta hit na nkọwa ndị gbara ya gburugburu bụ maka nyocha na nyocha ọzọ.
Echekwala faịlụ a (CTRL+X) ka ịpụ apụ ozugbo nyochachara.
Nhọrọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ichepụ faịlụ ndị butere site na akụkọ ahụ ngwa ngwa, mee iwu a:
N'ime nkuzi na-esote, ị mụtala ka esi etinye Maldet na Rocky Linux 8 wee jiri isi ihe dị na sava weebụ wee nyochaa faịlụ ndị butere ọrịa. N'ozuzu, ngwanro ahụ bụ ụzọ dị irè isi ihicha ọrịa ahụ ma dị mma na ya, n'agbanyeghị na ịchebe onye ọrụ ma ọ bụ weebụsaịtị ka dị mkpa iji zere ọrịa ọzọ na kwesịrị ịbụ isi ihe mbụ tupu iji Maldet, dị ka ezigbo nchebe na nhazi. ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile igbochi ọrịa na-eme na mbụ.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmatakwu gbasara iwu Maldet, gaa na onye ọrụ gọọmentị ibe akwukwo.
Categories Nkume linux Tags Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye onye ahịa IRC Lounge na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye Python 3.8 na Debian 11 Bullseye